मधेसमा सिके राउतलाई तनाव, पूर्वराजालाई स्वागत ! – Hello Punarwas
काठमाडौंमा भाइरल बनेका राउतको मधेसमा ‘सटर’ बन्द
On २९ फाल्गुन २०७५, बुधबार २२:५९
मात्रिका पौडेल/श्रवण देव
२९ फागुन, जनकपुरधाम ।
काठमाडौंमा सिके राउतले व्यापक चर्चा पाइरहेका बेला मधेसमा उल्टो परिदृश्य देखिएको छ । सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गरेलगत्तै मधेस झरेका सिके राउत र उनका समर्थकका गतिविधिहरु एकाएक सेलाएका छन् । बरु पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका समर्थकको दौडधूप मधेसमा सुरु भएको छ ।
सिके राउतले सरकारसँग सम्झौता गरेपछि तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ ? हाम्रो प्रश्नमा श्री किसुनले भने, ‘मैले माछा पसल चलाइरहेको छु । तर, यो पसल धेरै चल्ने अवस्था छैन । यदि भोलि मलाई तपाईले दुई/चार सय दिन्छु यो पसल छाड्दे भन्नुभयो भने, म सटर बन्द गर्दिन्छु । सिके राउतवाला फण्डा यही हो ।’
स्वदेशी लघुवित्त पुनर्वासद्वारा सरसफाई कार्यक्रम
विश्व रामसारमा सुचिकृत घोडाघोडी तालमा पर्यटकको संख्यामा कमि